Damee indastiriifi bu'uuraalee misoomaa
Guddina dinagdee hanga ammaatti Itoophiyaa keessatti galmaa'aa jiruuf gumaacha olaanaa taasisaa kan jiru damee qonnaa yoo ta'u, fuulduratti damee indastiriitiin bakka buusuuf hojjatamaa jira.
Guddina dinagdee waliigalaa biyyattii keessatti gumaachi damee indaastirii hanga ammaatti gadaanaa ta'us, yeroodhaa gara yerootti fooyya'aa jiraachuusaa ragaaleen ni mul'isu.
Guddina dinagdee biyyattii qonnaan durfamaa jiru gara indastiriitti ceesisuuf hojiilee hedduun raawwatamaa kan jiran yoo ta'u, keessumaa bu'uraalee misoomaa babal'ina indastiriitiif barbaachisoo ta'aniif dursi kennamuu qaba.
Hojiin indastirii biyyattii keessatti babal'isuuf qofa hojjatamu rakkoolee gara garaatiif saaxiluu kan danda'u waan ta'eefi indastiriiwwan iddoowwan adda addaatti faca'anii ijaaramaniif bu'uraalee misoomaa kanneen akka daandii, ibsaafi bishaaniifaa waliin ga'uun rakkisaa ta'a.
Ijaarsi paarkiiwwan indastirii yeroo ammaa naannawawwan biyyattii gara garaatti ijaaramaa jiran immoo rakkoolee faca'iinsa indastiriitiin dhiheessa bu'uraalee misoomaarratti dhiibbaa geessisaa jiran kanneen furuurra darbee, indastiriiwwan omisha walfakkaatu omishuurratti hirmaatan koriidara tokko keessatti akka hojjataniifi rakkoolee birootiifis furmaata guddaa ta'ee argameera.
Haala kanaanis sochii biyyattiin guddina biyyaa qonnaan durfamurraa gara indastiriin durfamuutti ceesisuuf taasisaa jirtuufis ijaarsi paarkiiwwan kanneenii shoora olaanaa taphachaa jira.
Indastiriin maanufaakchariingii tarsiimoo mataasaatiin durfamee guddina biyyaa keessatti ga'ee olaanaa akka taphatuufi gama carraa hojii baay'inaan uumuutiinis dorgomaa kan hinqabne waan ta'eef KGT lammataa keessatti xiyyeeffannoon olaanaan kan kennameef ta'uus beekamaadha.
Mariin damee indastirii manufakchariingii dorgomaafi ittifufiinsa qabu horachuu irratti xiyyeeffate dhiheenya kana Finfinneetti adeemsifameera. Waggoota muraasa dhufanitti Itoophiyaa giddugala indaastirii manufaakchariingii taasisuudhaaf hojjatamaa jiraachuu Ministir De'eetaan Indartirii Doktar Mabratuu Mallas maricharratti himaniiru.
Akka isaan jedhanitti, guddinni si'ataan biyyattiitti waggoota darban keessatti galmaa'aa ture cimee akka itti fufuuf babal'inni indastirii iddoo olaanaa qaba. Karoorri Itoophiyaa giddugala indastirii maanufaakchariingii Afrikaa taasisuuf qabames waggoota muraasa booda kan dhugoomu ta'uu dubbatu.
Ijaarsi paarkiiwwan indastirii ijaaramaa jiranis karooricha galmaan ga'uu keessatti shoora olaanaa qabaachuusaanii eeranii, paarkiiwwan hanga ammaatti ijaaramanis faayidaa dachaa kennaa kan jiran ta'uu ibsu.
Babal'inni indastrii maanuufaakchariingii bakka bu'uraaleen misoomaa gahaan hin diriirfamnetti galma ga'uu kan hin dandeenye ta'uufi kana hubachuudhaan mootummaan wayitii ammaa babal'ina bu'uraalee misoomaatiifis xiyyeeffannoodhaan hojjachaa jiraachuu dubbatu.
Paarkiiwwan indastirii ijaarsisaanii xumuramee hojii eegalanitti hirmaachuuf dhaabbileen biyya alaa hedduu fedhii kan agarsiisan ta'uufi kun immoo gara fuula duraatti paarkiiwwan hedduu ijaaruudhaan carraa bal'aa kanatti fayyadamuu kan gaafatu ta'uu himu.
Pirezidaantiin Mana Maree Daldalaafi Dameelee Itoophiyaa, Obbo Salamoon Afwarqi gamasaaniitiin akka jedhanitti, Itoophiyaa biyya indastiriin badhaate taasisuuf muuxannoo biyyoota indastiriidhaan sooromanii fiduuf manni marichaa hojiiwwan hedduu raawwachaa jira. Fooramiiwwan daldalaa gara garaa qopheessuudhaan indastiriyaalistootni biyya keessaa kanneen alaa dhufanirraa akka baratan taasisaa jirra jedhu.
Sochiin daldala biyyattii akka cimuufi keessattuu damee indastirii maanufaakchariingiitiin karoora baafatte akka galmaan geessuuf hojiin muuxannoo biyyoota gara garaarraa qindeessuu akkuma jirutti ta'ee, kaampaanootni biyyoota gara garaa paarkiiwwan indastirii ijaaramanitti akka dhufaniif hojii beeksisuu hojjachaa jiraachuus ni ibsu.
Sochiin guddina Itoophiyaa biyyoota Afrikaa birootiif akka fakkeenyaatti kan gargaaru ta'uu kan himan Obbo Salamoon, keessumaa waggoota muraasa keessatti babal'inni indastirii biyyattiis bifa gaarii ta'een adeemaa jiraachuu dubbatu.
Indastrii maanuufaakchariingiitiif biyyoota Afrikaa hedduu keessatti dhimmi guddaan akka rakkootti ka'u hanqina bu'uraalee misoomaa ta'uusaafi Itoophiyaan rakkoo gama kanaan jiru furuuf babal'ina bu'uraalee misoomaatiif xiyyeeffannoo kennitee hojjachaa jiraachuunshee ammas biyyoota Afrikaa birootiif fakkeenya kan taatu ta'uu ibsu.
Walumaagalatti, rakkoolee guddina damee kanaan qoraa jiran furuudhaan dameen indastirii biyyattii guddina biyyaa keessatti dursummaa akka qabaatuuf hojiin eegalame cimee itti fufuu qaba.
Torban kana/This_Week 11183
Torban darbe/This_Month 97540
Guyyaa mara/All_Days 1435963